Gianluigi Buffon oo u sharaxay Kylian Mbappé inuu ku guuleysan doono abaal marinta Ballon d’Or – Wakaaladda Wararka Hiilnews
Gianluigi Buffon oo u sharaxay Kylian Mbappé inuu ku guuleysan doono abaal marinta Ballon d’Or
Jimco, October, 19, 2018(HNN) Gianluigi Buffon ayaa aaminsan in saaxiibkiis kooxda Paris Saint-Germain Kylian Mbappé uu u qalmo ku guuleysiga abaalmarinta xiisaha badan ee Ballon d’Or.
19 jirkan ayaa kasoo caawiyay xulkiisa qaranka France inay ku guuleystaan koobka aduunka 2018 ee lagu qabtay dalka Russia, xili sidoo kale qaab ciyaareed cajiib ah uu ku soo bandhigay xili ciyaareedkiisa ugu horeeyay ee PSG.
Hadaba goolhaayihii hore kooxda Juventus ee Gianluigi Buffon ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu ku sheegay hadii uu Kylian Mbappé sii joogteeyo qaab ciyaareedkan inuu noqon doono ciyaaryahanka ugu fiican aduunka.
“Kylian Mbappé waa calaamad, hadii uu sii joogteeyo rabitaankiisa ah inuu noqdo kan ugu fiican, markaas ayuu u qalmaa inuu noqdo kan ugu fiican aduunka mudo aad u fog”.
“Talyaaniga waxay la barbar dhigeen Roberto Baggio, Francesco Totti, Alessandro Del Piero, laakiin wuxuu leeyahay qaab ciyaareed iyo tayo aan waligey ku dhex arkin inta aan ku gudi jiray xirfadeyda kubada cagta”.
“Tayadiisa, waxa uu ka sameynayo garoonka iyo sida uu u go’aamiyay Koobka Aduunka, wuxuu u qalmaa inuu ku guuleysto abaal marinta Ballon d’Or”.
Gianluigi Buffon oo u sharaxay Kylian Mbappé inuu ku guuleysan doono abaal marinta Ballon d’Or added by admin on 19/10/2018